'Raha vao miala ianao dia miala' - Tompondakan'ny WWE teo aloha dia tsy niresaka tamin'i Vince McMahon nandritra ny taona maro - Wwe
Nandritra ny resadresaka nifanaovana farany tamin'ny Voafaritra Pro Wrestling , ny tompon-daka tamin'ny WWE teo aloha Alberto Del Rio dia nanambara fa tsy niresaka tamin'i Vince McMahon nandritra ny taona maro izy.
Ny fihazakazahan'i Del Rio farany tamin'ny WWE dia nifarana tamin'ny taona 2016 noho ny tsy fitovizan'ny famoronana, ary ilay mpandresy Royal Rumble dia niaritra fiakarana sy fianjerana maro teo amin'ny fiainany.
El Patron dia nanambara fa ny mpiasan'ny WWE dia tsy mifandray amin'ny talenta taloha ary nahatsapa fa izany no antony voalohany tsy nifandraisany tamin'i Vince McMahon hatramin'ny 2016.
Lahatsoratra iray nozarain'i Alberto El Patron (@prideofmexico)
Nanampy ilay superstar miteny fa ny orinasa dia mety hanome toromarika ny mpiasany mba tsy hifandray amin'ny 'ivelany'.
inona no nanjo an'i enzo amore
'Oh, efa taona maro izay. Ao amin'ny WWE, izany no fomba fiasa. Toy ny, rehefa miala amin'ny orinasa ianao dia tsy misy miresaka aminao. Tsy misy olona. Tsy misy olona! Toy ny, tsy maninona izany. Rehefa lasa ianao dia miala ary tsy miteny aho hoe izao no ataon'izy ireo, saingy heveriko fa izany no ataon'izy ireo. Nilaza tamin'ny olona izy ireo mba tsy hifandray amin'ny olona ivelany. Heveriko fa. Tsy milaza izany aho fa zava-misy voaporofo. Izaho dia, izany no eritreritro, na izy ireo ihany no tsy te-hifandray amin'ireo nanapa-kevitra ny handao ny orinasa matahotra tahotra omby miaraka amin'ny orinasa na hafanana tahaka izay lazainay amin'ny orinasa mpiady. Saingy, eny, izany no antony tsy niresahako tamin'i Vince elaela izay, 'hoy i Del Rio.
Tsy mbola niresaka izahay hatramin'ny nialako: Alberto Del Rio tamin'ny fifandraisany tamin'i Scott Armstrong an'ny WWE
Alberto Del Rio koa dia nanokatra ny fisakaizany tamin'ny mpamokatra WWE, Scott Armstrong ary nanambara ny fomba niarahan'izy ireo taona maro lasa izay tamin'ny fampiroboroboana.
Scott Armstrong no malaza indrindra amin'ny androny amin'ny maha mpitsara ombelahin-tongony azy, ary i Del Rio dia nizara fotoana tsy hay hadinoina tamin'ny olona teo amin'ny efijery taloha.
ny fomba hialana amin'ny fifandraisana clingy
Iza no mila ho hitako @UniversalORL momba ny fanovana ny andro amin'ity takelaka mahafinaritra ity eo am-baravaran'ny Park?!?!?! # Talata #Orlando #CityWalk @WWENXT pic.twitter.com/qpYdUUzIKs
- Scott Armstrong (@WWEArmstrong) 27 Jolay 2021
Na eo aza ny fifandraisan'izy ireo matanjaka any ambadiky ny sehatra dia nanambara i Del Rio fa tsy nifandray tamin'i Armstrong izy hatramin'ny nandaozany ny WWE.
Nilaza anefa i Alberto fa nanana fifanakalozana tamin'i Armstrong tao amin'ny Twitter izy volana vitsivitsy lasa izay saingy tsy nandinika ny antsipirian'ny resak'izy ireo.
'Toa ahy sy i Scott Armstrong,' Hey, inona izany ry anti-dahy? F'inona no mitranga? Scott Armstrong, toa azy izy, iray amin'ireo namako malalako indrindra. Toy ny, mizara ora sy andro maro be eny an-dalana izahay, mifanampy, mifampizara tantara, miaraka mahafinaritra. Fa fantatrao, tsy mbola niresaka izahay hatramin'ny nialako tany WWE. Fa fantatrao, fantany fa tiako izy, fantatro fa tia ahy izy. Saingy mbola tsy niresaka izahay hatramin'ny nialako. Nanana fifandraisana vitsivitsy tao amin'ny Twitter izahay toy ny roa volana lasa izay. Fa ao amin'ny Twitter fotsiny satria fantatro ny fomba fiasan'io orinasa io. '
Alberto Del Rio dia efa niasa roa tamin'ny WWE, ary naneho ny faniriany hiasa ho an'i Vince McMahon indray ilay superstar mampiady hevitra.
Hahafinaritra ny lehiben'ny WWE ve ny hanao raharaha amin'ny Tompondakan'i WWE 4 fotoana? Ampahafantaro anay ny hevitray ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Raha misy teny nindramina nampiasaina tamin'ity lahatsoratra ity, azafady mba omeo tombony Pro Wrestling voafaritra ary omeo H / T ho an'ny Sportskeeda Wrestling.
inona no vidin'ny kevin o leary net
te hitomany aho fa tsy afaka
ny fomba hampitsaharana ny ankizilahy saro-piaro
ahoana no ilazana raha misy vehivavy tia anao
dia tsy afaka hijery ny olona ao an-maso
iray miaraka amin'ny mpiasan'ny sambo
mahatsiaro mitomany aho fa tsy afaka